Frito Frito an'i McDonald ho famantarana famantarana | Famoronana an-tserasera
Amin'ity indray mitoraka ity dia izy ireo ny fries an'ny McDonald malaza ireo izay amina dokam-barotra maromaro dia mitarika ny mpamily sy ny karazan-fiara rehetra.
Noraisin'izy ireo ny volavolan-kevitra momba ny fries frantsay mivoaka amin'ny fonosana mena, hamoronana làlana ahafahan'ny mpamily môtô mandeha any amin'ny toeram-piorenany.
Namboarin'i TWAParis ho an'ny McDonald's France, ny peta-drindrina tsirairay dia miasa ho toy ny tondro miaraka amin'ny soratra hoe "mandeha mahitsy," mihodina miankavia, na "mihodina miankavanana."
Tsy izy ireo ihany no manan-kery amin'ireo famantarana telo ireo, fa misy hatramin'ny 64 ny fiovana isan-karazany ary izany dia mampiseho ny haavon'ny maha-izy azy sy ny fahaiza-mamorona sarobidy amin'ity masoivohon'ny famoronana ity izay afaka nampiasa ireto chips ireto.
Manoro hevitra an'izany izahay jereo ny horonantsary zarainay mba ho hitanao manokana ny maha-izy azy ny tsirairay sy ny fomba fiasan'ny tsirairay manokana ho toy ny afisy ho an'ny McDonald's.
Mikasika ny famolavolana dia hevitra mamirapiratra izany dia mifanindran-dàlana amin'ny mombamomba anao vaovao avy amin'ny mpamolavola Turner Duckworth. Fanentanana dokam-barotra izay manalavitra be an'ireo satroka noforonin'i KFC ary izany dia namela tsiro hafahafa somary hafahafa teo am-bavantsika noho ny tsy fahampian'ny foto-kevitra.
Doka izay miasa amin'ny ohatra ho an'izay manomboka amin'ny fitsipika fototra amin'ny famolavolana doka. Makà singa iray izay misy fifamatorana manokana miaraka amin'ny marika ary ampiasao izy io mba hivadika azy io ho toy ny fanentanana fanentanana vaovao ka aorian'ny fanovana azy dia afaka mampiseho feo hafa an'ny marika izy.
Una hevitra notanterahin'io ekipa mpamorona frantsay io hamadihana ny fries an'ny McDonald ho torolàlana ho an'ireo mpitondra môtô sy mpamily amin'ny faharariany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Rehefa fries McDonald's fries dia mpitari-dalana môtô
Instagram sy WhatsApp mahazo rebrand
Arindrao ny Instagram amin'ny ColorStory